Mazano ekukurumidzira manejimendi
ITRA yakatenderwa tekinoroji yekununura kudzidziswa
PSI inopa masevhisi pasi rese mukuchengetedzwa kweruzhinji forensic ongororo, kubvunzana, kutsvagisa, dzidzo uye kudzidziswa. Tichishandisa network yedu yepasirese yevanopa mazano nyanzvi isu tinokwanisa kuita mapurojekiti kuti tive nechokwadi chemhinduro inoshanda kune ramangwana chengetedzo yeruzhinji matambudziko kubva kukutonga njodzi kusvika kuhunyanzvi hwekununura.
Kubvunza nezvekuchengetedzwa kweveruzhinji uye kuongororwa kwe forensic nevarapi vepasirese nyanzvi vane magwaro ekupasa.
ITRA yakatenderwa kudzidziswa pasi rese kusanganisira tambo, nzvimbo yakavharirwa uye kununura mvura yemafashama. Kubva padanho rekutanga kusvika padanho remudzidzisi.
Isu tinopa tsvakiridzo mune zvekuchengetedza veruzhinji zvine chekuita nenyaya, kubva kuhutungamiriri hwechimbichimbi, hutano hwemhuka kusvika pakununura kwehunyanzvi.
Kudzidziswa Kwekuchengetedza Mafashamo
Kana uine vashandi vari kushanda kana kutyaira vachitenderera nzizi, madziva, migero kana dzimwe nzira dzemvura, wakazadzikisa zvakakwana zvisungo zvako zvekuvadzivirira pasi pemutemo wehutano nekuchengeteka here?
Isu tinopa yakasarudzika kudzidziswa kuchengetedza mvura inotenderwa neiyo International Technical Rescue Association.
Pamhepo Multi-Lingual Mafashama & Swiftwater Makosi Zvino Mahara
Makosi edu ese epamhepo ave kuita mitauro yakawanda achishandisa GTranslate. Iyi puratifomu ine simba inoshandisa shandurudzo yemuchina weneural kuti ipe mhando yeshanduro yemhando yevanhu. Read More
Public Safety Institute inofara kuzivisa iyo yekutanga ITRA Swiftwater Vehicle Rescue Instructor Workshop ichaitwa 10-14 Chikumi, 2020 kuMangahao Whitewater Park, Shannon, New Zealand. <="" p=""> Read More
Inofona kune International Sponsorship application
Kana uri sangano riri kunze kweNew Zealand neAustralia, PSI yave kutsvaga kunyoresa kufarira kubatsira sangano risina zviwanikwa kuti risimudzire simba rekununura mafashamu munyika yavo. Read More